I-Arkansas Tech Admissions: UMTHETHO I-Scores, I-Acceptance Rate
I-Arkansas Tech University Admissions Overview:
Uninzi lwabafundi bahambisa amanqaku ukusuka kwi-ACT test xa befaka isicelo kwi-Arkansas Tech, nangona isikolo samkela amanqaku ukusuka kumThetho okanye kwi-SAT. Abafundi mabazithumele amanqaku ukusuka kumnye walezo ziviwo -candelo lokubhala alifunwa, nangona kunjalo. Ukongeza, abafake izicelo kufuneka bangenise isicelo kwi-intanethi baze bathumele esikolweni esiphakamileyo.
Isikolo sikhuthaza abafundi ukuba batyelele kwaye batyelele i-Arkansas Tech campus ngaphambi kokufaka isicelo; Abafundi abanomdla kufuneka bahlole iwebhusayithi yesikolo ukucwangcisa utyelelo kunye nohambo. Ngesilinganiso sokwamkela ama-64%, abafundi abanamabanga amabakala kunye namanqaku okuvavanya banethuba elifanelekileyo lokuvunyelwa.
I-Arkansas I-Acceptance Rate: 64%
Ukuthelekiswa kwe-SAT kwiikholeji zase-Arkansas
Umlinganiselo we-ACT kwiikholeji zase-Arkansas
I-Arkansas Tech University Incazelo:
Eyasungulwa ngo-1909, i-Arkansas Tech University iyunivesithi yoluntu esekwe sixeko saseRussellville, eAnsansas. I-Little Rock i malunga neyure, kwaye iFayetteville ingaphantsi kweeyure ezimbini. Iyunivesithi ine-campus ye-satellite e-Ozark.
Abafundi bavela kumazwe angama-41 namazwe angama-38. Iinkalo zobugcisa ezifana nobuhlengikazi, ishishini, imfundo kunye nobunjineli bonke abadumileyo phakathi kwabafundi bokugqibela. I-Arkansas Tech academics ixhaswa ngumlinganiselo we-18 ukuya ku-1 womfundi / umgaqo-faculty. Ubomi bomfundi busebenza kunye nemibutho engaphezu kwe-100 yemfundo kuquka inethiwekhi yomnxeba kunye nenkohlakalo.
Kwiimidlalo, i-Arkansas Tech Wonder Boys kunye ne-Golden Suns ukuncintisana kwi-NCAA Division II I- Great American Conference . Amacandelo eyunivesithi amadoda amane kunye namaqela amathandathu ahlukeneyo amabhinqa amabhinqa. Imidlalo evelele ibandakanya ibhola yebhoksi, ibhola, umkhondo kunye nenkundla, kunye negalufa.
Ubhaliso lwabonke: 11,894 (11,053 izifundo zakudala)
Imfundo kunye neMali: i-$ 6,624 (e-state); $ 11,880 (ngaphandle kwe-state)
Iincwadi: $ 1,410 ( kutheni uninzi? )
Igumbi neBhodi: i-$ 7,204
Ezinye iindleko: $ 2,996
Iindleko ezipheleleyo: $ 18,234 (kwi-state); $ 23,490 (ngaphandle kwimeko)
I-Arkansas Tech Yunivesithi yoNcedo lwezeMali (2015 - 16):
Izibonelelo: $ 6,641
Imali: $ 5,950
I-Majors Eyaziwayo kakhulu: Ibhizinisi lezoLimo, iMfundo yabantwana abaselula, uLawulo oluPhezulu, uLawulo kunye nokuThengisa, Ubunjineli boMbane, uLondolozi, iMfundo yePhysical, Psychology
Ukugcinwa kwabafundi beNyaka yokuqala (abafundi bexesha elipheleleyo): 69%
Ukukhutshwa kwezinga: 27%
Ireyithi yokuQinyezelwa kweNyaka eyi-4: 19%
Ireyithi yoNyaka weeNgqesho ze-6: 37%
Imidlalo Yabantu: Ibhola, iGalofu, iBhola lebhola, iBhola
Imidlalo yabasetyhini: I- Softball, iTennis, iVolleyball, I-Track and Field, iGalofu, iBhola leBhola, iLizwe eliPhambeneyo
Ukuba Uthanda iTanansas Tech, Unokuthi Wathanda Ezi Zikolo:
Abafakizicelo abanomdla kwi-Arkansas Tech yeendawo zayo kunye nobukhulu kufuneka baqwalasele izikolo ezifana ne- Arkansas State University , iYunivesithi yase-Arkansas e-Little Rock , iYunivesithi yase-Arkansas e-Fort Smith , kunye neYunivesithi yaseCentral Arkansas , yonke ekhona e-Arkansas, kwaye banama-5 000-10,000 abafundi ababhalisile.
Ezinye izikolo kwiNgqungquthela eNkulu yaseMerika ziquka iYunivesithi yase-East Central , i- Harding University , iYunivesithi yase- Southern Arkansas kunye ne- Henderson State University . Ezi zikolo zincinci kune-Arkansas Tech, kodwa zinikela ngokubanzi uluhlu lweenkqubo zemfundo kwaye zivunyelwene ngokubanzi.
INkomfa enkulu eNtshona-ntsapho ye-Athletic, i-GNAC
I-Massachusetts College ye-Pharmacy kunye neMpilo (i-MCPHS)
I-Admissions yaseYunivesithi yaseBrigham
I-Admissions yeYunivesithi yaseSanta John
I-California State University-Los Angeles (CSULA) I-Admissions
Burqa okanye iBurqah
I-Libra, i-Aquarius kunye neGemini Ngaba i-Air Elements
Study Unit Unit - Georgia
Indlela yokubhala iPhepha leMbali yeMbali
25 Inkumbulo yeenja eziya kuhlala zihleka